Andiany 870JD Jet Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Ny dredge an'ny Series 870JD Jet Dragon® dia dredge cutterhead lalina mihady lalina izay ampiasaina amin'ny fahazoana fasika sy fitaovana hafa amin'ny halalin'ny lalina. Ity dredge matanjaka, azo itokisana ary azo entina ity dia misy fantsom-panafody roa ao amin'ny cutter ho an'ny fanadiovana tanimanga na famoahana fitaovana hafa avy amin'ny lelam-bokatra tsy misy fidiran'ny tanana.
Azo entina amin'ny kamiao mankany amin'ny toerana anatiny.
Rafitra fanaraha-maso mifototra amin'ny State-of-the-Art PLC.
Ny jet pump assist dia mamela ny taham-pamokarana avo lenta amin'ny fampiharana mihady lalina tsy misy fahasarotana amin'ny paompy tohatra.
Ny fampiasana mahazatra dia misy ny fitrandrahana fasika sy vatokely, fanodinana tany amin'ny fanarenana ny tany, ary ny fangatahana mpifanaraka kely kokoa.
Haben'ny famoahana: 14 ″ x 14 ″ (350 mm x 350 mm)
Maotera mpanampy C-13: 385 HP (289 kW)
Ny halalin'ny dredging farany ambany: 60 ′ (18.2 m)
FIKAMBANANA NY FAMPISORANA
Kitapo akanjo fampitaovana winch
Hookeller manainga impeller
Fehezo ny hafanan'ny cab sy ny fifehezana rivotra
Safidy fanampiny azo alaina amin'ny fangatahana